31 May 2013 - Fante Online
Friday Sermon: Proclaim the Bounties of Allah - USA and Canadian Tours - 31st April 2013 - Fante Online
Fida Nyamesɛmka: Esusuowketseaba 24, 2013.
(Friday sermon – 24th May, 2013 – Fante Translation)
HOM MFA ALLAH N’AYƐMUYIE NTO GUA-USA NA CANADAMAN MU NSRAHWƐ
“Na ͻfa no hom Ewuradze N’ayɛmuyie no hom nka nkyerɛ binom” (93:12).
Nyankopͻn N’ayɛmuyie botum ayɛ wiadze dze, sɛ yɛhwɛ gyedzi ͻnye sunsum mu a. Wiadze ayɛmuyie wͻdze ma ankorankor na obiara, ͻso obiara do. Hͻn a wͻwͻ gyedzi na wobu Nyankopͻn dɛ Ɔno nye nhyira nyinara ne farbaa no wͻdze ndaase so ma wiadze ayɛmuyie. Dɛ mbrɛ hͻn enyisͻ wͻ ndaase ho yɛ hͻnara hͻn ndzeyɛɛ no, wͻka kyerɛ wiadzemba so dɛ nhyira fi Nyankopͻn nkotsee hͻ. Afei ayɛmuyie ho gyedzi na sunsum ho gyedzi wͻ hͻ.
Ahmadiyyafo dze yɛyɛ asomafo ma nyia no a ͻyɛ nokwarfo na otuu no ho maa Nkͻmhyɛnyi Krͻnkrͻn (NNN) no; ͻno nye Anohoba Mɛsia (ANN) na yeenya dɛm ayɛmuyie. Ɔyɛ nhyɛ ma Ahmadiyyanyi ankorankor biara dɛ ͻdze Nyankopͻn N’ayɛmuyie na Ne nhyira bͻto gua. Kwan kor a obodua do ayɛ nye ibedzi Nyankopͻn Ne mbransɛm no do na kwan kor so nye enam Nyamesɛmka do bͻbͻ no dawur akyerɛ wiadze, dɛ wͻmbra ma yɛnkyɛ sunsum mu kan a ͻwͻ dɛ wͻdze ma hɛn ama yɛayɛ Nyankopͻn Ne nhyira mu enyafo. Dɛm Nyankopͻn Ne kan yi nkotsee na ͻbɛma ayɛ mberɛw ma wͻadͻn obiara ne bra a ͻrobͻ no wiadze yi mu no ngo ͻnye ne bra n’ewie.
Ɔyɛ nsɛnkyerɛdze so wͻ Nyankopͻn N’ayɛmuyie ho dɛ Ɔyɛ hɛn adom wͻ mbͻdzen kakrabaabi a yɛrobͻ no na ohyira hɛn mbordo mbordo a hɛn enyi nnda. Iyi so twe adwen kͻ No do. Gyedzi nokwarfo wͻ dɛ onya adwen hweromu wͻ asɛm yi ho ama wͻakͻ do eenya Nyankopͻn N’adom no. Nyankopͻn somaa Anohoba Mɛsia (ANN) no wͻ hɛn mber yi mu dɛ ͻmbͻtow Nkͻmhyɛnyi Krͻnkrͻn n’asɛm no mpetse. Nyankopͻn dze Ne mboa na nsɛnkyerɛdze a ͻnye no kͻ do somaa no; ͻno na yehu no ndɛ yi. Dɛm nsɛnkyerɛdze yinom a ͻnye Nyuankopͻn No mboa sɛw do yi, ͻnam Nyame mu anohoba do, osiandɛ Nyankopͻn kaa kyerɛɛ Anohoba Mɛsia (ANN) dadaw dɛ onnkotum eenya N’ayɛmuyie nyinara.
Woyii kyerɛɛ no dɛ “Sɛ ekan Nyankopͻn N’enyimpa a nnkotum ayɛ” [Tadhkirah, pp. 120 – 121 2009 edition]. Nyikyerɛ kor so kyerɛɛ dɛ “kͻdo ara fa wo Ewuradze N’ayɛmuyie to gua” [Tadhkirah, pp. 557 – 558].
Anohoba Mɛsia (ANN) no kyerɛɛw dɛ: “Ɔnam mbransɛm a ͻtoado yi ntsi: “Na ͻfa no w’Ewuradze N’ayɛmuyie ho no, ka kyerɛ binom so”, ͻhobrasefo yi hu dɛ biribi aba nntͻ sin wͻ dɛ ebɛkyerɛ iyi ͻnam N’adom na N’enyimpa ntsi; Nyankopͻn No a Ɔkrͻn eso Ɔyɛ Mbͻbͻrhufo no dze ayɛmuyie ama dɛm ahobrasefo yi wͻ dɛm ndzɛmba nyinara mu. Ɔannsoma nyia mfaso nnyi no ho a ͻtse dɛm dɛ ͻdze ne nsapan na Ɔammfa dwumadzi annhyɛ ne nsa wͻ ber a nsɛnkyerɛdze nnka ho. Ma ͻtse nye dɛ nsɛnkyerɛdze nyinara wͻdze maa no ma seiseiara woridzi dwuma na ͻbͻkͻdo ayɛ dɛmara. Otumfo Nyankopͻn bͻkͻdo ara ada Ne nsɛnkyerɛdze no edzi akͻpem dɛ Ɔbɛma ntseasee etsim” (Wͻkyerɛɛ ase fii Tafseer-ul-Quran Vol. VI pp.649).
Anohoba Mɛsia (ANN) no kyerɛɛw bio dɛ: “Ahobrase na botooyɛ …yɛ gyinabew a ohia wͻ Ubadiyyat ho (etuhoakyɛ ma Nyankopͻn dɛ eyɛ No somafo) mbom ͻnam mbransɛm a ͻkrͻn no ntsi: “Na ͻnam w’Ewuradze N’ayɛmuyie ntsi, ka kyerɛ binom, odzi mu papaapa dɛ ebɛka Nyame ho ayɛmuyie akyerɛ (Wͻkyerɛɛ ase fii Tafseer-ul-Quran Vol. VI pp.649).
Ber biara a yenya Nyankopͻn N’adom na Ne nhyira no yɛbͻ no dawur na yɛka ͻnam mbransɛm a ͻwͻ Kuran nyiyimu yi mu ntsi na ampaara ͻwͻ dɛ yɛyɛ so. Mbom wͻdze ahobrase yɛ iyi kyɛn dɛ yɛbͻhoran dze aka. Hadhrat Khalifatul Masih ͻaka nserɛhwɛ ndaase yi wͻ USA na Canada a ndzeyɛɛ pii kͻͻr do a ͻnye ananabenfo hyiaae. Nyankopͻn maa wͻdze Islam ho nsɛm no ankasankasa too guan a dɛm nsɛm yi too n’abasa kͻr mbeambea a nna Jama’at a wͻwͻ hͻ no hͻn enyi nnda. Iyi yɛ Nyankopͻn Ne nhyira mu nhyira, na iyi nnyɛ ͻdasanyi ne mbͻdzembͻ.
Hɛn Jama’at yi woyii enyim wͻ USA Anee afamu, ͻnam Hadhrat Khalifatul Masih ne nserɛhwɛ wͻ beebi a ͻnnkͻr hͻ da. Ɔkͻr Los Angeles. Kurowpͻn no a n’apaamu hͻ wͻka Portuguese na Spain kasa a dɛm dͻm yi ahyɛ hͻ ma; na dwuma a dɛm dͻm yi wͻdɛ wodzi no yɛkaa noho asɛm wͻ ndawͻtwe a abɛsen kͻ no wͻ Fida Nyamesɛmka no mu. Ndɛ Huzoor paa Jama’at yi ho tam kyerɛɛ nanabenfo. Jama’at no too pon wͻ ahͻhohyiabea bi a ͻwͻ Los Angeles. Apamfo a wͻreyɛ iyi ho nhyehyɛɛ no dween dɛ ͻnam dɛ apontu no tow fa wiadze afamu ntsi dͻm nnkɛba, mbom dͻm kͻͻr do ara daa hͻn pɛ edzi dɛ wͻbɛba kɛpem da a odzi ewie a wͻdze robͻto pon no. Dɛm nhyehyɛɛ yi wͻyɛ dɛ wͻkan nkorͻfo bi ano a enyi da do dɛ wͻbɛba efi hͻn a wͻato nsa afrɛ hͻn no. Mbom, nyimpa pii gyee pen dɛ wͻbɛba ma ͻgyee apamfo no a wͻreyɛ ho nhyehyɛɛ no adwendwen. Ewie no, ngua no wͻdɛ wͻdze bi kaho ma dɛm ntsi hͻn a wͻkyerɛɛ dɛ wͻnye hͻn anyɛnkofo bɛba no gyedɛ wͻpa hͻn kyɛw. Enyimnyamfo piinara baa apontu no ase.
Hadhrat Khalifatul Masih kasae wͻ ase. Otwaa no tsia kyerɛɛ Kuran mu asɛm. Wiadze nyinara Ewuradze na ogyinaa do kasaa faa ͻdͻ na ayɛmuyie a Nkͻmhyɛnyi Krͻnkrͻn (NNN) wͻ ma adasamba na ͻkyerɛɛ mu dɛ ne nhyira suban no yɛ fasusu ma hɛn. Islam bɛyɛ dɛn bɛyɛ etsiͻdzen som? Dɛm fasusu yi tͻͻ dͻm no do. Obiara kaa dɛ nkyerɛkyerɛ yi wͻdɛ wͻtow petse, wiadze hia dɛm nkyerɛkyerɛ yi. Nkorͻfo baa ne nkyɛn na wͻkyerɛɛ hͻn atsenka na binom twee kͻͻr kasafir do kɛmaa MTA.
Wͻyɛɛ dɛm apontu no wͻ Esusowketseaba II ma nkorͻfo a wofifi mbeambea pii baa ase. Hͻn a wͻbaa apontu no ase yɛ ahabien eduokron biako (291). Hͻn enyi gyee Islam nkyerɛkyerɛ a ͻyɛ asomdwee, ͻdͻ, enyidzi na pɛrpɛr no. hͻn a wͻbaa apontu no ase no hͻn mu beenum yɛ US mbrahyɛ begyinafo (US Congress), duanan yɛ dawurbͻ dwumadzi a ͻwͻ atsenkwa, nwomahufo, duesuon yɛ aban edwuma mpanyimfo, eduasa esoun yɛ abemfo, duebiasa yɛ ananmusifo, edwuma a wͻnnhyɛ aban ase (NGO) hͻn anamusifo, nsͻrbansͻrba eduonu akron hͻn ananmusifo na akakabenfo wͻ ndzɛmba a wosua ho. Dza odzidzi do yi yɛ hͻn a wͻbaa apontu no ase no mu bi hͻn adwen.
Barbara Goldberg kaa dɛ: Merekyerɛw ada m’enyigye edzi dɛ hom ato nsa afrɛ me dɛ membɛka ho ma wͻmma ͻhotseweefo akwaaba. Hom yɛɛ nhyehyɛɛ a ͻyɛ nwanwa a ͻkyerɛ obu na ͻda Kuw a hɛn mu faara nnyim no papa biara.
Obi so a ͻbae apontu n’ase kaa dɛ: Ɔhotseweefo yi gyina hͻ ma Kuw a menye no mmbͻͻ awɛr papa biara naaso ne nsɛm nye me nyamesɛm ho gyedzi kͻ do mapa. Yɛdͻ obiara, yɛnntan obiara, yɛgye obiara to mu, Nyankopͻn Kortsee wͻ hͻ na ne Nyankopͻn yɛ me Nyankopͻn…asɛm biara a ofi n’anomu puei yɛ nokwar. No botae a ͻyɛ wiadze asomdwee nna no kͻkͻbͻ a ͻnye dza ͻrokͻ do wͻ mber yi mu yi kͻ do a ͻfa no ͻko a wͻdze ndzɛmba a ͻyɛ hu ko no, nyinara yɛ nsɛm a hͻn banodzifo wͻdɛ wͻtse na wͻdze kͻ nyɛe do.
Opanyin bi a ͻyɛ Mayor wͻ Redlands kaa dɛ: Mepɛ dɛ meda wo ase wͻ dɛ wͻato nsa afrɛ me dɛ membɛka homho Memenda yi mbɛtsie Ɔhotseweefo ne nsɛm a ogyina penkyɛr na asomdwee wͻ nkitahodzi ho wͻ wiadze yi mu. Ɔyɛɛ me enyigye pii dɛ metsee asɛm a Ɔhotseweefo kae a ͻfa no asͻr na aban ntamu. Ɔwͻ dɛ yehu dɛ nkorͻfo pii wͻ hͻ a wͻyɛ enyimpamu tsia hͻn ͻnam hͻn gyedzi wͻ nyamesom mu ntsi. Menye Ɔhotseweefo yɛ adwen dɛ sɛ nsɛm a ͻka nyimpa hyɛ na ewudzi a wͻdze ridzi nkorͻfo ammbͻ adze a, asomdwee nnkɛba ara da. M’enyidado ara nye dɛ yɛbͻkͻdo atsetse hɛn mbabun no, yebotum ebuei hͻn enyi wͻ penkyɛr mu na hɛn enyi bɛgye hɛnho hɛnho no dze hɛn bͻkͻ wiadze a ͻyɛ papa eso penkyɛr wͻ mu. Sɛ yɛhwɛ asɛm no ne fa kor a, USA wͻhͻ na wͻkasa tsia Islam na yɛhwɛ n’afa kor so a wͻgye Islam ne nkyerɛkyerɛ to mu.
Lee Baca, Los Angeles County Hwɛdofo a ͻwͻ atsenka kaa dɛ: Ɔhotseweefo Mirza Masroor Ahmad a ͻkɛseraa Los Angeles maa ͻdze ne nsɛm a ͻfa no asomdwee, ͻdͻ na pɛrpɛr kɛmaa dͻm a hͻn dodow yɛ ahaenum a wofi nsͻrbansͻrba mu. Nkorͻfo a wͻhyiaa hͻn binom yɛ ntwitwagye ho banodzifo, mbrahyɛ baguafo, hͻn a wͻhwɛ ekurowpͻn do, na nwomahufo. Ɔhotseweefo tsii ‘Ɔdͻ ma obiara, Ɔtan mma obiara’ mu yie dɛ ͻyɛ Nkͻmhyɛnyi Krͻnkrͻn (NNN) no, no nokwar nkyerɛkyerɛ. Wiadze asomdwee yɛ nsͻrbansͻrba nyina hͻn asodzii dɛ wͻbɛtam esuo mu; iyi yɛ hͻn a wͻbaa apontu ase nyina ntseasee. Dɛm ͻman yi ara so na wͻkaa nsɛm pii a ͻnnyɛ nokwar tsiaa Islam na Nkͻmhyɛnyi Krͻnkrͻn (NNN) na afei wͻdze Islam ne nkyerɛkyerɛ kͻͻr hͻyi, wonntum nhyɛ dza wͻkaa no ma. Kɛtseankyɛ Nyankopͻn ama Muslimfo nyansa ma wͻdze Islam ne nkyerɛkyerɛ fɛɛfɛw no etsim na wͻdze ayɛ edwuma so.
Ɔnyimdzifo Grey Davis a nkyɛ ͻyɛ California Ɔhwɛdofo (Governor) no kaa dɛ: Nokwar m’enyi gye nsɛm a ͻfa no asomdwee, ntseasee na obu a wͻdze bu Nyankopͻn Ne mba. Hom nyim, M’adwen nye dɛ ͻwͻ dɛ yehu dɛ hɛn nyinara yɛ Nyamemba …Nyankopͻn Kortsee wͻ hͻ. Ɔbͻͻ hɛn nyinara, na Ɔpɛɛ dɛ yɛdͻ No na yɛdͻ hɛn fisamenafo. Mpuntu no ase no nna ͻtse bɛn Huzoor papaapa ntsi ͻnye no dzii nkͻmbͻ na ͻkyerɛɛ n’enyigye wͻ MTA mu na ͻgyee ndzɛmba bi a ͻbɛma ͻ’ahwɛ dza ͻrokͻ do wͻ MTA do.
Eric Garcetti a ͻyɛ Los Angeles City Council Kuwba no kaa dɛ: Ɔhotseweefo ne nsɛm no kyerɛ kwanpa a ͻma enuadͻ na obu a ͻyɛ asomdwee na mpuntu ne fapem wͻ wiadze mu. Kɛtseankyɛ no dwuma a oridzi dɛ ͻdze nsɛm a ͻfa no ͻdͻ, asomdwee, ankorankor tumdzi, penkyɛr, apetse wiadze no aaba mu.
Dana Rahrabacher, US Mbrahyɛ baguanyi dɛ: Ɔhotseweefo dze nsɛm ato hͻ ndɛ a atͻ hɛn nyinara do. Ne nsɛm a otwa fa penkyɛr na ͻdͻ ho na ankorankor gye hͻnho to mu no dzi mu a ͻkyekyerɛ hɛn nyinara bͻmu kor. Ndɛ nye da a m’ehu no na m’enyi agye ne nwomasu, n’adwen na adwen mu mpiwii wͻ nsɛm ho a ͻdze ato hɛn enyim yi na mbrɛ osi peɛwpeɛw wiadze nsɛm mu. Ɔyɛ asɛm a wiadze gyedzi ahorow nyina bɛgye ato mu. N’asomdwee asɛm gye dɛ wotsie …ͻdze kasamu nyimdzee ka asomdwee ho nsɛm.
Rachael Moran, a ͻhwɛ California Mbra Ntsetseebea do a ͻwͻ California Esuapͻn mu hͻ no kaa dɛ: Ɔyɛ enyimnyam na eyiedzi ma me dɛ meka dɛm ehyiadzi a ͻma asomdwee na penkyɛr na kankͻ. Ndɛ da yi, yɛdze adzesuadze a ohia rokͻ hɛn efiefi; asodzi da hɛn nyinara hɛn do dɛ yɛhwehwɛ asetsena mu kommyɛ na yɛtow bamba a yebotum afa do wͻ hɛn akwan na hɛn bra nyinara mu. Ebɛnadze na ͻbɛma hɛn nkanyan sen iyi? Ɔhotseweefo yi gyina hͻ ma sunsum na adwen mu ndzɛmba a ͻma hɛn ndzɛmba a ohia wͻ wiadze yi a nsɛmansɛma ahyɛ mu ma yi. Ɔkaa hɛn dɛ asomdwee yɛ ͻdodow ahyɛdze na ͻkyerɛ dɛ asͻr nkabͻmu wͻ n’adwen mu na ne nyansapͻw so nye dɛ yɛdze asͻr to nkyɛn a hɛn nyinara yɛyɛ ͻdͻ ho adze na ͻyɛ nhyɛ ma dɛ yɛbͻdͻ obiara.
Onyimdzifo Mohammad Samir Council General of Egypt dɛ: Ɔyɛ Nyansa ho banodzifo… ne nsɛm ma nkanyan papaapa na mehyɛ nkorͻfo nkuran dɛ wondzi dwuma na wͻnka mbͻmu ntsena…ͻwͻ dɛ yedzi n’afotusɛm biara do na yɛbͻmu tsena.
Sophia Pandya a ͻyɛ ͻbemfo wͻ nyamesɛm ho wͻ California State Esuapͻn mu kaa dɛ: Emi, mara m’enyi agye Ɔhotseweefo ne nsɛm no a ogyina wiadze asomdwee na ͻdͻ a ͻka adasa do. Wiadze hia nyimpa no dͻ ho kan dɛ Ahmadiyya Kuw no.
Aziza Hasan a nkyɛ ͻyɛ Ɔkwankyerɛfo ma Muslim Public Affairs Council kaa dɛ: Mobͻ w’abaw do wͻ dwuma nwanwa a wodzii no Memenda a etwa mu yi. Ber a morokͻ fie no nna moho abaa me na m’enya ahoͻdzen fofor dɛ meyɛ obi a m’awea gyedzi horow ho na meyɛ Muslim Kuwba. Ɔhotseweefo n’ano tseew wͻ ne nsɛm no ho na dza ͻkaa no so tse dɛmara. M’enyi gyee papaapa dɛ ͻkasae tsiaa basabasayɛ sombo a wͻdze bͻͻ Nkͻmhyɛnyi Krͻnkrͻn Muhammad (NNN). Nkorͻfo pii bͻ mbͻdzen dɛ wobeyi asɛm yi akwa anaa wͻsaw kyin ho kɛkɛ. Ne nsɛm no kͻr enyimdzifo no a wͻehyia mu wͻ hͻ no a hͻn akadofo dͻͻso no.
John McMahon a ofi San Barardiw County Sheriff’s Asoɛe kaa dɛ: asɛm no nam ne kyenan do na hɛn nyinara gye to mu dɛ yɛrebͻ mu ayɛ edwuma akͻ asomdwee ho no, nye kwan a ͻwͻ dɛ yɛfa do.
Dr. Frank Leivo a oenya eduyɛ mu atsenka no kaa dɛ: Ɔhotseweefo gyina hͻ ma som ne fa bi a mennye no nnyaa nkitahodzi naaso ne nsɛm nye me somho nyimdzii a mowͻ kͻ do mapa….asɛm biara a ofi n’anomu no yɛ nokwar. No botae a osi wiadze asomdwee do na no kͻkͻbͻ wͻ ndzɛmba ekukudam a wͻdze dzi ako ho no yɛ nsɛm a hɛn banodzifo hia dɛ wͻtse na wodzi do.
Ɔsͻfo Jan Chase kaa dɛ: Ɔyɛ me dɛw dɛ m’enya kwan nye Ɔhotseweefo ridzi ehyia wͻ apontu yi ase. Ɔyɛɛ me pɛ dodow dɛ ͻkasaa faa basabasayɛ ho pͻkyee.
Dana Rohrabacher yɛ Republican Mbrahyɛ baguanyi a ne nsɛnkaa ͻtaa kyerɛ dɛ otsia Islam. Ber a wͻtoow ͻtopae wͻ Boston no ͻkaa dɛ Islam hyɛ mbofra nkuran dɛ wondzi ewu na ͻyɛ mbusu wͻ wiadze ndɛ mber yi. N’adwenkyerɛ wͻ mpontu no ho wͻ Los Angeles no woedzi kan abͻ dzin dadaw wͻ akyerɛw yi no sor hͻ. Ekyir yi ͻkyerɛɛw krataa kɛmaa hɛn kwankyerɛfo a ͻhwɛ baguamu nsɛm ho (Director of Public Affairs) wͻ Americaman mu dɛ: Ɔhotseweefo wͻ dɛ onya enyigye dɛ o’edzi nkunyim dɛ ne nserahwɛ wͻ California Anaafo edua nduamba a ͻbɛma akoma edzi dɛw mfe pii. Iyi na Huzoor ne nserahwɛ dze aba wͻ n’adwenkyerɛ ho.
Hadhrat Khalifatul Masih nye Los Angeles Times dzii mbisase na ne nsunsuado na woetsintsim no wͻ ase ha yi:
Asɛmbisa (A): Isi dɛn tow Islam a ͻyɛ asomdwee som yi ne nsɛmpa petse Americaman yi mu ͻnam ewirkadze a Muslim akodzenfo reyɛ yi na obinom so wͻ adwen tsia mbrɛ Islam tse yi?
Nyiano (N): Nkorͻfo a wotsia Islam ayɛ Muslimfo ayɛyɛadze na wͻahyɛ hͻn akͻmfo mber pii wͻ abakͻsɛm mu, ma dɛm ntsi wͻnye hͻn dzi ako yɛ hͻn bi wͻ ayɛyɛadze a wͻdze yɛ hͻn no ho. Mbom siesieara dze akodzi wͻ som ho a ͻtse dɛm nnyi hͻ. Ber biara a kuw bi bͻsoɛr wͻ Islam dzin mu dandan ne (Islam) nkyerɛkyerɛ no, ͻwͻ dɛ yɛsoɛr kasa ho. Nnyɛ Americaman mu nko, mbom wiadze ne afɛnandze nyinara Islam n’atanfo gu som no ho fi, hͻn a wonnyi nokwar ntseasee wͻ Islam ho. Iyinom nye ekuwekuw a wͻtaa basabasayɛ ekyir no, wͻnnyɛ nkorͻfo a wͻyɛ nokwar som no ekyirtaafo.
America ha yɛwͻ nhyehyɛɛ a yɛdze dzi dwumapa. Mfe ebien a etwa mu kͻ no, yɛridzi dwuma a yɛato no dzin “Muslims For Life” (Muslimfo Abrabͻ) dawurbͻ. Yɛtwe bͻgya dze kyɛ. Asͻpͻn noara yɛtwee bͻgya mbͻdambͻ ͻpepe du dze kyekyɛɛ ayarsabea pii.
A: Wo kuw yi kyerɛ dɛ Asͻr nko, na Aban nko. Ɔwͻ dɛ wͻtsew hͻn ntamu ma obiara noara gyina n’anansa do. Iyi agye ntaa wͻ amanaman a ͻdodow yɛ Muslimfo wͻ Boka Finimfin (Middle East) hͻ; bea a amanyɛ banodzifo no robͻ mbͻdzen dze Islam aman abͻbͻ adze dze ahyɛ nhyɛ aban a woetutu hͻn agu wͻ Arab Apaamu (Arab spring) hͻ. Ana apaamu hͻ bͻdwe, ehw ɛ a sɛ wͻdze aban a ͻnnhyɛ nyamesom ase ba a?
N: Dza yehu no wͻ Egypt nye dɛ wotuu Honsi Mubarak adze do no, nsesa biara mmbae. Yɛwͻ aban a besi ndɛ ͻnnyɛ n’asɛdze mma ͻman no na ͻmmbu nkorͻfo hͻn eyiedzi. Libyaman mu no ebusua biara wͻ n’aban. Ɔsoafo a ͻhwɛ bambͻ do no bͻͻ kͻkͻ ndansa yi dɛ obinom pɛ dɛ wotu aban no a wͻatow aba eyi no no, na gyedɛ wͻyɛ ho biribi ͻno ͻman no bɛyɛ bisibisi basaa. Wͻ Tunisiaman mu no obiara dɛ wͻresesa ͻman no akͻ ne yieyɛ mu papaapa wͻ nyamesom dzin mu naaso asomdwee nnyi hͻ. Sɛ nokwar ka-ma-menka-bi amambu bɛba apaamu hͻ a gyedɛ wodua amambu a wͻyɛ no wͻ Anee wiadze afamu (West).
A: Ɔbɛyɛ dɛn bɛyɛ ma amanaman kuw dze asomdwee aba apaamu hͻ a akokoeko na basabasayɛ esi hͻ yi?
N: Abosoom kakra a etwa mu yi, Ɔman panyin Shimon Peres a ͻwͻ Israel kaa dɛ Amansan Nkabͻmu Kuw mfa asordaafo nkͻ amanaman a basabasayɛ esi hͻ no; mbom Arab nsordaafo nkotsee na nnyɛ Anee aman mu nsordaafo bi a. Odzi mui ma aman a wͻbenbɛn dɛ wͻbɛka ekua na wͻabͻ mbͻdze esiw akasakasa biara awͻ apaamu hͻ. Ɔyɛ apaamu hͻ hͻn asɛdze dɛ wobesiw ewurkadze a ͻrokͻ do wͻ Syriaman mu hͻ no.
A: Ebɛn kwan do na edwen dɛ ko a esi wͻ Syria yi bɛtsew?
N: Syria aban hͻn dodowara yɛ Alawite na Syriamba hͻn dodowara yɛ Sunnis. Aban no dzii Sunnifo no hͻn enyi na wͻdze enyimpamu bae. Na seiseiara dze binom so aba ͻman no mu a wͻpɛ hͻnara so hͻn yesu a hͻn a wodzi emim mbordo ka ho dɛ wͻrebɛyɛ etuatsewfo no mboa. Dɛm ntsi akasakasa abɛda etuatsewfo no na aban no ntamu. Ayɛkayɛkadze na adzesɛe no, aban no dze hyɛɛ ase, mbom ekuw ebien nyina dzi fͻ. Hͻnara nnkotum esiesie, dɛm ntsi ͻwͻ dɛ tserɛwbͻ bi ba ma wͻhwehwɛ kwan a ͻbɛma ko no aba ewie.
A: W’asɛm nye dɛ ͻyɛ aman a wͻbɛn ho no hͻn asodzi dɛ wͻbͻhwehwɛ kwan a wͻbɛfa do ma asomdwee aba. Ehu mbͻdzen a Russia na America dze too gua dɛ wͻnye aman ebien nyina bɛka ekua na wͻayɛ nhyehyɛɛ a aman a wͻbɛn hͻn no enyi bɛgye ho?
N: Wiadze nyinara ndɛ ayɛ wiadze kurowba, ntsi dza bea a wͻbɛn ho nyina ayɛ bayaa. Mbom wiadze nkyekyɛ mu akɛse ebien no da ho wͻ hͻ a Russiafo hyɛ Syria aban no tsipia ma aman a wͻwͻ Anee afamu no so hyɛ etuatsewfo no so tsipia. Ɔbɛyɛ adwenpa ama Americaman na Russiaman dɛ wͻbɛma adze sɛe no abͻ adze. Ɔwͻ dɛ ͻbͻ adze osiandɛ sɛ ͻkͻdo a ͻbͻtwe wiadze nyinara aba mu.
A: Ahmadiyya Muslim Kuw no wͻahyɛ ne mpanyimfo no ma woetu efi Pakistan kͻ amantu mu, na dɛm akasakasa yi bɛyɛ dɛn ama Islam nkyerɛkyerɛ no abͻ mu akͻ do tͻͻtsee?
N: Yɛgye dzi dɛ Mɛsia no aba dɛ ͻyɛ ͻsomafo, dɛ ͻyɛ nkͻmhyɛnyi a ͻnndze mbra biara aba; ͻno na ͻdze Ahmadiyya Muslim Kuw no bͻbͻͻ adze. Muslimfo no bi nngye nnto mu na wͻnngye nndzi dɛ sɛ Nkͻmhyɛnyi Krͻnkrͻn (NNN) ba na ͻkͻ a Nkͻmhyɛnyi biara nnkopuei n’ekyir bio, sɛ ͻdze mbra bɛba O! anaa ͻnnkɛfa aba O! Pakistan aban no ahyɛ mbra etsia Ahmadiyyafo kyerɛ dɛ wͻnnyɛ Muslimfo wͻ mbra na nkyerɛkyerɛ mu. Ahmadiyyafo twamu ͻpepe, nnyɛ Pakistan nko. Mbom botum ehu wͻ hͻ dɛ Pakistan Mullahfo suro dɛ sɛ woennsiw Ahmadiyyafo no ho kwan dɛ wͻdze hͻn pɛ bɛyɛ hͻn som a, ͻnnkɛkyɛr biara Ahmadiyya Kuw no botum atwe Pakistan Muslim akra nyinara akͻ hͻn nkyɛn.
A: Ɔman bɛn na Ahmadiyya Kuwmba dͻͻso papaapa, na henfa so na Kuw no riyin ntsɛmtsɛm?
N: Yɛwͻ dͻm mpempem wͻ Asia naaso Ebibir Atoe afa mu na Kuw no riyin na ͻrotu mpon ntsɛmtsɛm. Nkyɛ Pakistan asͻrmba dͻͻso yie. Naaso mber yi mu no Ebibir amanaman no bi dͻͻso papaapa yie. Nyimpa mpempem na wͻdͻm Kuw yi da biara. Obinom suro Islam som no, obinom so mpo kyir asͻrasͻr nyinara, wͻnngye Nyame biara nndzi naaso mber bi bɛba a wͻbɛsan ahwehwɛ nyamesom.
Yɛwͻ awerɛhyɛmu dɛ sɛ wodu dɛm gyinabew no a yebotum aboa hͻn mu dodow nara ma wͻahyɛ hͻn sunsum mu sintͻ yi ma wͻ Islam nokwar nkyerɛkyerɛ do.
Hadhrat Khalifatul Masih kaa dɛ, mpɛn pii wͻ hͻ a nsɛm bisa no pii wͻ hͻ a wͻmmbͻ ho dawur naaso Los Angeles Times dawurbͻ nwoma no ma hɛn nsɛm ho dawurbͻ wͻ hͻn dawurbͻ krataa no mu. Huzoor kaa kyerɛ nsɛmkyerɛwfo no dɛ sɛ mber yi do nyimpa anngye Ahmadiyya annto mu a hͻn awow ntoatoado bɛgye Ahmadiyya ato mu. Na ͻyɛ Ahmadiyya na obotum ahyɛ hͻn sunsum mu sintͻ no ma ama nyimpa dodow noara.
Wall Street Journal nsɛmkyerɛwfo no bisaa Hadhrat Khalifatul Masih dɛ siantsir bɛn na ͻnam do ma ͻdze bɛseraa California yi? Oyii ano dɛ, asaase nyinara yɛ hɛn dze, dɛm ntsi ͻwͻ dɛ yɛdze hɛn nsɛm no kͻ wiadze afɛnandze nyinara. Na tsitsir nye dɛ mobͻhwɛɛ m’asͻrmba a wͻwͻ ha. Bɛyɛ dɛ nna n’adwen yɛ no dɛ amanyɛsɛm ntsi na me bae na morobͻhwehwɛ mfaso bi efi ha. Hadhrat Khalifatul Masih kaa dɛ wͻammba dɛ ͻrobͻhwehwɛ mfaso biara ama no ho anaa n’asͻrmba no. Ɔka dɛ botae kor a medze nam nye dɛ mebotum ama hom edzibewdzifo ayɛ nhyehyɛɛ a ͻdze asomdwee bɛba wiadze. Afei ͻtwee adwen gyina dɛ yɛbͻhwɛ eyi amanaman ko a wͻabɛsensɛn hɛn kͻn do no. Sɛ yɛannhwɛ ennyi dɛm gyinabew yi a wͻama adasamba pii rohwer hͻn nkwa no emmfi hͻ a, na ͻka dɛ ͻyɛ Ngyiresi Abrokyirman Atoe mu na dɛm ehwimhwim no fi reba.
Ɔnam LA Times Dawurbͻ krataa, Wall Street Journal, Chicago Tribune na Dawurbͻ nkrataa ahorow do maa hɛn nsɛm duur nyimpa bɛyɛ ͻpepe enum na fa (5.5million) hͻ. Nyimpa bɛyɛ ͻpepe enum na ne boree na wͻnam dawurbͻ nkrataa yi do tsee dɛm nsɛm yi, na nyimpa bɛyɛ ͻpepe fã na wͻdua “radio” do tsee nsɛm no. Ɔnnyɛ adze a nkyɛ yebotum dze hɛn tum ayɛ, mbom ͻyɛ Nyankopͻn N’adom ara kwa. Ɔnam No tum do na ͻwͻ dɛ yedua iyi do nya mfaso na yɛdze edwuma no kͻ kan na yɛma otu mpon.
Nserahwɛ bea a ͻtͻ do ebien nye Vancouver a ͻwͻ Canadaman mu. Hͻ na asͻrdan a dzin dze Baitur Rahman no wͻpaa ho tam. Wͻtoow nsa frɛɛ ahͻho piinara na dawurbͻ nkrataa ahorow pii so baa dwumadzi yi ase bi. Sɛ yɛkeka bͻ mu a Canadaman nyinara mu nyimpa bɛyɛ ͻpepe awotwe (8million) na wͻtsee hɛn nsɛm a ͻwͻ dawurbͻ nye nsɛmbisa a nsɛmkyerɛwfo no bisabisa Hadhrat Khalifatul Masih V. CBC (Canadaman mu TV) na BBC bͻͻ asͻrdan no mbuei no ho dawur na nyimpa bɛyɛ ͻpepe kor na wͻnam mfir do hwɛɛ dwumadzi a ͻtse dɛm yi. Nyimpa ͻpepe ebien hwɛɛ no wͻ CTV na nyimpa kuw bɛyɛ mpem ahaesia na wͻhwɛɛ no wͻ Global TV. Dawurbͻ nkrataa du biako na wͻbͻͻ ho dawur na Radio so bͻͻ ho dawur ma nyimpa bɛyɛ mpem ahaesia tsee.
Manmeet Singh yɛ Jama’at yi ne nyɛnko, ͻyɛ ͻsoafo wͻ Alberta mansin mu. Ɔka dɛ na wͻakyerɛw nsɛmpͻw bi a ͻfa asomdwee ho a nkyɛ ͻrokɛ kenkan no wͻ Geneva na ͻka dɛ, ber a otsiee Hadhrat Khalifatul Masih no nsɛm wiee no wͻayɛ n’adwen dɛ ͻbɛyɛ nsesa wͻ ne nsɛmpͻw no mu, na ͻdze nsɛmpͻw bi a Huzoor kaa no ahyehyɛ mu. Radio kasafir bi a wͻfrɛ no Sher-e-Punjab kaa dɛ, Huzoor ne kasaa no ma akokodur pii. Obi fofor so kaa dɛ Huzoor dɛ sɛ yebuei asͻrdan fofor a nna yeebuei kwan fofor ato hͻ ama fahodzi fofor. CBC kasafir n’anamusinyi no kaa dɛ Huzoor yiyii nsɛm a wobisaa no nyinara ano yie. Obi so ka dɛ afei na wͻatse dɛ nsɛm a ͻnnyɛ nkyerɛkyerɛ kɛkɛ wͻ som yi mu. Ɔka dɛ ͻbɛka dɛm nsɛm yi akyerɛ ne mba.
Morocco Muslimnyi bi so kaa dɛ ͻwͻ awerɛhyɛmu dɛ Huzoor n’asomdwee nsɛm no bɛboa ma nkorͻfo eyi tsirmupͻw a wͻwͻ wͻ Islam ho efi hͻ dɛ Islam yɛ nhyɛ som. Ɔdɛ ͻyɛ Muslimnyi naaso woesua ndzɛmba pii efi Huzoor ne kasaa no mu. Ɔhͻho bi so kaa dɛ Huzoor ne kasaa no ma adwen pii na ͻfa nsɛm pii so ho. Ne nsɛm no tsitsir gyina ndzɛmba a adasamba suro ho, ͻyɛ nsɛm a no mu dͻ na awerɛhyɛmu wͻ mu. Obi so ka dɛ Nyankopͻn No koryɛ ho nsɛm a ͻwͻ mu no hia ma wiadze nyinara. Dawurbͻ asoɛe ahorow pii na wͻboa ma nsɛm yi petsee. Americaman mu dͻm bɛyɛ ͻha nkyɛmu anan (4/5) na wͻtsee dɛm nsɛm yi. Ɔfa no Atoe mansim mu no nyimpa bɛyɛ ͻha nkyɛmu eduonu enum na wͻtsee. Wͻ Canadaman mu no ͻman no nyinara mu dͻm bɛyɛ ͻha nkyɛmu eduonu enum na wͻtsee. Iyi yɛ Nyankopͻn N’adom na Ne nhyira ara kwa.
Obi bisaa wͻ Canada dɛ asͻr yi yɛ asomdwee asͻr sɛso ampa, ana no mu dͻm no bͻ asomdwee bra anaa? Hadhrat Khalifatul Masih buaa dɛ Kuran no mu mbra kyerɛ asomdwee, dɛm ntsi sɛ odzikannyi bi anaa Muslimfo bi nndzi dɛm mbra no do a, na ͻyɛ hͻn mfomdo. Muslimfo nndzi dɛm mbra yi do ntsi nna Nyankopͻn soma Anohoba Mɛsia (ANN) no. Nsɛm pii esisi, ofi ber to ber, Canada keteke akwanhyia, Boston ͻtopae a osii, London ekumekum, iyi nyinara yɛ nkorͻfo kumaabi na wͻyɛ no wͻ Islam dzin mu. Huzoor kaa dɛ iyinom nyinara fi dɛ nyimpa adan n’ekyir ama Nyankopͻn na wͻyɛ dɛm ewurkadze yi wͻ Islam ne dzin mu. Ɔkamfoo Muslim Egyinatufo Kuw a wͻwͻ London wͻ kasa a wͻkaa faa ewudzi a osii wͻ London hͻ no, na ͻkaa dɛ ͻnnyɛ Islam no nkyerɛkyerɛ dɛ obi bɛyɛ dɛm.
Wobisaa dɛ, ebɛnadze na yɛbɛyɛ esiw ͻyɛtrado nhyɛdo ho kwan wͻ wiadze yi mu? Yɛgudo ara rosom adasamba wͻ amanaman ahorow do a yɛreboa hͻn akwan ahorow pii do na yɛrebͻ asomdwee ho dawur. Yennyi tum biara dɛ yɛdze asomdwee bɛba wiadze, na dza yɛbotum ayɛ ara nye dɛ yɛbͻbͻ Islam nkyerɛkyerɛ ho dawur na yɛbͻkͻ do ara ayɛ. Ɔriyi nsɛm a ͻfa ͻyɛtrado ano no, Hadhrat Khalifatul Masih kaa dɛ, hɛn asͻrdan nyinara ma asomdwee na ͻdͻ ho nkyerɛkyerɛ. Dɛm ntsi na nyimpabͻnfo nndͻͻso wͻ hɛn Kuw yi mu no. Sɛ obi wͻ mu a ͻnnfata a, yɛyi no edzi fi som no mu.
CBC nsɛmkyerɛfo no bͻͻ mbͻdzen wͻ akwan ahorow pii do dɛ nkyɛ ͻbɛma Huzoor agye ato mu dɛ Islam nnyɛ asomdwee som na Muslimfo mbͻ asomdwee bra. Huzoor buaa no dɛ, ͻkwan biara nnyi hͻ a ͻbɛfa do ama wͻaka dɛ Islam nnyɛ asomdwee som na ͻrennsesa n’ano so nnka asɛm fofor. Na ͻsɛnkyerɛwfo no bisaa no bio dɛ kwan bɛn do na yɛbɛfa atserɛw hɛn nsɛm yi mu akͻ wiadze afɛnandze nyinara.
Hadhrat Khalifatul Masih kyerɛɛ dɛ yɛdze Islam nkyerɛkyerɛ korgyee no reyɛ edwuma na yemmpetuw nnyɛ biribiara. Yɛrobͻ mbͻdzen dze hɛn nsɛm akͻ wiadze n’afɛnandze nyinara. Mber bi na ͻyɛ Anohoba Mɛsia (ANN) no nkotsee, na noara ankasa n’aber do no, onyaa nyimpa mpem aha enum. Hɛn ber do yi yɛayɛ ͻpepepem. Ɔyɛ Nyankopͻn Ne pɛ a, Muslimfo nye hͻn a wͻnnyɛ Muslimfo nyinara rehɛn Ahmadiyya Kuw yi mu. Nyankopͻn N’adom ara kwa nsusuii kyerɛ dɛ nyimpa bɛyɛ ͻpepe eduonu (20milliom) na wͻtsee Ahmadiyya ho nsɛm wͻ Huzoor ne nserahwɛ wͻ America Etsifi afamu. Dɛ yɛbotum abͻ dawur kɛse dɛm ma nyimpa dodow dɛm atse na wͻbenya nsunsuado pa na hͻn mboa ronntum nye nyimpasu no dwumadzi. Iyi ofi Nyankopͻn. Nda kakra a abɛsen kͻ no, Hadhrat Khalifatul Masih kaa Hadhrat Khalifatul Masih a ͻtͻ do anan no daaso bi a ͻkyerɛ dɛ ohun nyimpa pii wͻ Los Angeles mansin no mu. Daaso no mu no, ͻtsee dͻm pii hͻn ndze nkotsee dɛ wͻreka nkunyimdzisɛm roboa Islam nye Ahmadiyyat. Nokwar nye dɛ ndze a wͻkasa fua nserahwɛ yi ka iyi so ho. Dza wͻatwe adwen egyina do na ebisatse nyinara afei ͻbɛkyerɛ dɛ dɛm ndze yi bͻkͻdo akasa wͻ ber yi do na akͻ sor ͻnam Islam ntsi.
Hadhrat Khalifatul Masih kaa dɛ ͻyɛ nsɛnkyerɛdze soronko a ofi Nyankopͻn hͻ dɛ bosoom kor a abɛsen yi ͻkͻr nserahwɛ wͻ Spain na woyii Jama’at yi enyim papaapa wͻ hͻ. Ɔman a nkyɛ ͻhyɛ Islam ase no ndɛ abɛyɛ Kristian na mbrɛana wͻretsɛw Islam bio a. iyi ekyir bosoom kor no bea a ͻwͻ USA a Hadhrat Khalifatul Masih kɛseraa no hͻn a wͻka Spanish na Portuguese kasa no ahyɛ hͻ ma twem. Afei abɛyɛ hɛn dwumasom dɛ yɛbͻhwɛ iyi yie na yɛdze asɛm no akͻ Spainfo a wͻwͻ Wipue na Witͻree ahyɛ ngyinado na yɛdze abɛhyɛ Islam frankaa no ase. Dɛ mbrɛ wͻkasaa ho wͻ Fida Nyamesɛmka wͻ Los Angeles no Americafo no a wͻka Spanish na Portuguese kasa no ka dɛ wͻbor nkorͻfo a wͻwͻ Spain no do mpon mu do ntsi wͻmma enyi mbra hͻn do.
Hadhrat Musleh Maud (Allah N’enyi ngye no ho) kaa no da kor bi dɛ USA wͻ nsunsuado bi wͻ “ewia a opuei fi Anee” wͻ nkitahodzi. Ɔwͻ dɛ yɛyɛ Tabligh ho nhyehyɛɛ pͻkyee wͻ USA mbom ͻwͻ dɛ yɛyɛ hɛn adwen dɛ yɛnnkobu hɛn enyi egu hɛnara hɛn Tarbiyyat a ͻyɛ hͻn a wͻaba fofor no hͻn dze no. Ɔwͻ dɛ yɛdze ndaase na ntͻyɛɛ dzi dɛm dwuma yi. Dɛmara so na Canadaman ne nkyɛmu anan hͻn nsa aka hɛn nkyerɛkyerɛ no. Canada Jama’at so wͻdɛ wͻdze asɛm no tu ntsen kͻ kan wͻ dɛ wͻdze Tabligh, Tarbiyyat nam na wͻkyerɛ hͻn ndaase na wͻsom Nyankopͻn wͻ pisi mu (Insha Allah). Kɛtseankyɛ Nyankopͻn ama Jama’at no na wiadze mba nkaa no nyinara hͻn botae ahyɛ ma wͻ mudzi mu.
Hadhrat Khalifatul Masih kaa dɛ wͻ America na Canada man mu no Nyankopͻn ama mbabun ahom ma wͻdze reyɛ edwuma wͻ akwan fofor ahorow do a orubuei ama hɛn. Dɛm mber yi do mba wͻdɛ wͻyɛ edwumadzen sen hͻn a woedzi hͻn enyim kan no na wͻmbͻ mbͻdzen nyi hͻn asodzi a ͻda hͻn do. Kyerɛkyerɛwfo a wͻwͻ aman ebien yi mu no nyinara yɛ mbabun na hͻn edwumayɛfo no nso robͻ hͻn ho mbͻdzen ara yie wͻ Nyame N’adom ntsi. Hͻn beenu no nyinara ayɛ edwuma akͻ ekyir ara yie. Siesieara ͻyɛ Tabligh na Tarbiyyat asoɛe na ͻwͻ dɛ wͻma mfaso ba dza wͻayɛ no ho. Yɛserɛ dɛ Nyankopͻn nhyira hͻn na ͻma hͻn ahobrase sunsum. Onnyi dɛ ntsɛn ba obiara no mu, mbom ͻwͻ dɛ ahobrase sunsum dͻͻ so. Anohoba Mɛsia (ANN) no kaa dɛ, ahobrase sunsum ho hia papaapa. Nyankopͻn mboa hɛn na Ɔma yenya dɛm sunsum yi. Amen!